एकदिने निःशुल्क शिविर, १ सय ५६ ले लिए स्वास्थ्य सेवा - Jhapa Online
एकदिने निःशुल्क शिविर, १ सय ५६ ले लिए स्वास्थ्य सेवा
मेचीनगर, २७ माघ । लायन्स र लियो क्लब अफ अनारमनीले मेचीनगर नगरपालिका–१ स्थित मेचीडाँडामा एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय पारिजात महिला समूहको व्यवस्थापनमा भएको स्वास्थ्य शिविरमा १ सय ५६ जनाले सेवा लिएका छन् ।
विष्णुकुमार पोखरेलको अध्यक्षता तथा मेचीनगर–१ का वडा सदस्य रामकुमार राईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको शिविरमा डा. गौरीशंकर झाले स्त्री तथा प्रसूति, डा. प्रमोदकुमार शाहले मुटु तथा छाती र डा. डिकेश पोखरेलले पेट रोगका बिरामीका लागि सेवा दिएको लायन्स क्लब अफ अनारमनीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
लायन्स र लियो क्लब अफ अनारमनीले विभिन्न समयमा सामाजिक कार्य गर्दै आएको लियो क्लबकी कोषाध्यक्ष समिरा शिवाकोटीले बताइन् । पवित्रा तामाङले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन अम्बिका भट्टराई आचार्यले गरेकी थिइन् ।